naturally - Synonyms of naturally | Antonyms of naturally | Definition of naturally | Example of naturally | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for naturally
Top 30 analogous words or synonyms for naturally
တရားရှုမှတ်ခြင်း ဗုဒ္ဓတရားတော်များသည် naturally or universally သဘာဝနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ logically ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒအရလည်းကောင်း၊ scientifically သိပ္ပံနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ medically ဆေးပညာဗေဒအရလည်းကောင်း မှန်ကန်လှပေသည်။ မိခင်ဝမ်းတွင်း သားသန္ဓေတည်ပုံကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၆၀ဝ) ကျော်ကတည်းက ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က မိုက်ခရိုစကုပ်မပါ၊ အာထရာဆောင်းမပါ၊ ဓါတ်မှန်မပါ ဉာဏ်တော်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၍ ရှင်းပြတော်မူနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံဗေဒ ကျန်းမာရေးသုတေသနများအရ သိရှိလာကြရသော စိတ်သည် ဦးနှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ နှလုံးသား၏အချိုင့်လေးတွင် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို ဗုဒ္ဓက ဟောပြတော်မူသဖြင့် ဝါရင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာများ သိရှိခဲ့ကြသည်မှာလည်း ကြာပြီဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒ၏ဖြစ်စဉ်ပျက်စဉ်အကြောင်းကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတို့ ယနေ့ခေတ် ဆဲလ်များအစားထိုးဖြစ်တည်မှုအကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ မသိရသေးခင်ကပင် သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ Anatomy အနတ်တိုမီ (ခေါ် ) ခန္ဓာဗေဒကိုလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက တရားတော်များ၌ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အဏုမြူ အက်တမ် (Atom) အကြောင်း မလေ့လာမီကပင် ပရမာအဏုမြူ စသည်ဖြင့် ဟောပြတော်မူခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များသည် သိပ္ပံနည်းကျ၊ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒ၊ ခန္ဓာဗေဒ၊ ဆေးပညာဗေဒ စသည်တို့ဖြင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်နေလျက်ရှိပြီး၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သမျှ တရားတော်များကို သိပ္ပံပညာက လိုက်မမီနိုင်သေးသော အနေအထားများ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေသေးသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
Bakersfield sound ၁၉၅၀တွင် အနောက်ကမ်းရိုးတမ်းတွင် စတင်အသံသွင်းယူခဲ့သည်။ Capitol Record က Shepard ၏ A Dear John Letter ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး Bakersfield ဂီတသမားများတွင် ပထမဆုံးရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အစောပိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် Bakersfield လှုပ်ရှားမှုမှ အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ခဲ့သည်။ Lewis Talley နှင့် Speedy West တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီး Susan Raye သည်လည်း Bakersfield sound တွင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ Buck Owen’s ၏ပွဲတွင် သူမလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အနောက်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော အခြားအမျိုးသမီးများမှာ Kay Adams နှင့် Rosie Flores တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ British Invasion သည်လည်း Bakersfield လွှမ်းမိုးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော rock တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Beatles တီးဝိုင်းသည်လည်း Owens ၏ Naturally ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ The Rolling Stones သည် Bakersfield သီချင်း Far Away Eyes ၏စာသားထဲတွင် သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ Bakersfield သီချင်းတွင် အနောက်ကမ်းရိုးတမ်းဂီတဖြစ်ရပ်တွင် ကြီးမားစွာလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ၁၉၆၀တွင် Bakersfield တွင် ဂီတာကုမ္ပဏီများ လာရောက်ဖွင့်လာကြသည်။ Morsrite ဂီတာကုမ္ပဏီသည် အရေးပါခဲ့ပြီး rock, country နှင့် Jazz ဂီတများ ယနေ့ခေတ်တိုင်လွှမ်းမိုးသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၂တွင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Oildale Semie Moseley သေဆုံးသည့်တိုင်အောင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Also in 2006 the average daily passenger flow through the four connections open at that time was over 200,000 in each direction of which 63 percent used the Luohu rail connection and 33 percent the Huanggang road connection. Naturally, such high volumes require special handling, and the largest group of people crossing the boundary, Hong Kong residents with Chinese citizenship, use onlyabiometric ID card (Home Return Permit) andathumb print reader. Asapoint of comparison, Hong Kong’s Chek Lap Kok Airport, the 5th busiest international airport in the world, handled 59,000 passengers per day in each direction.
ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ ဗုဒ္ဓတရားတော်များသည် naturally or universally သဘာဝနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ logically ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒအရလည်းကောင်း၊ scientifically သိပ္ပံနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ medically ဆေးပညာဗေဒအရလည်းကောင်း မှန်ကန်လှပေသည်။ မိခင်ဝမ်းတွင်း သားသန္ဓေတည်ပုံကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၆၀ဝ)ကျော်ကတည်းက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက မိုက်ခရိုစကုပ်မပါ၊ အာထရာဆောင်းမပါ၊ ဓါတ်မှန်မပါ ဉာဏ်တော်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၍ ရှင်းပြတော်မူနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံဗေဒ ကျန်းမာရေးသုတေသနများအရ သိရှိလာကြရသော စိတ်သည် ဦးနှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ နှလုံးသား၏အချိုင့်လေးတွင် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို ဗုဒ္ဓက ဟောပြတော်မူသဖြင့် ဝါရင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာများ သိရှိခဲ့ကြသည်မှာလည်း ကြာပြီဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒ၏ဖြစ်စဉ်ပျက်စဉ်အကြောင်းကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတို့ ယနေ့ခေတ် ဆဲလ်များအစားထိုးဖြစ်တည်မှုအကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ မသိရသေးခင်ကပင် သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ Anatomy အနတ်တိုမီခေါ် ခန္ဓာဗေဒကိုလည်း ဗုဒ္ဓက တရားတော်များ၌ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓက ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အဏုမြူ အက်တမ်(Atom)အကြောင်း မလေ့လာမီကပင် ပရမာအဏုမြူစသည်ဖြင့် ဟောပြတော်မူခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များသည် သိပ္ပံနည်းကျ၊ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒ၊ ခန္ဓာဗေဒ၊ ဆေးပညာဗေဒစသည်တို့ဖြင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်နေလျက်ရှိပြီး၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သမျှ တရားတော်များကို သိပ္ပံပညာက လိုက်မမီနိုင်သေးသော အနေအထားများ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေသေးသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ၏ တရားတော်များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကပင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခွင့် ရှိသောကြောင့် "ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ ပထမအစ၊ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က"' ဟု ဆိုအပ်လှပေသည်။ ဒီမိုကရေစီ၏အစ၊ ပထမ ဟု ထိုစဉ်ကအများက သက်မှတ်ထားသော ဂရိ နိုင်ငံ တွင် ဒီမိုကရေစီ မပေါ်ထွန်းသေးပါ၊ ကမ္ဘာ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဆိုကရေးတီး (ဘီစီ ၄၆၉-၃၉၉)၊ ပလေတို (ဘီစီ ၄၂၈-၃၄၈) ၊ အရစ္စတိုတယ် (ဘီစီ ၃၈၄-၃၂၂)၊နှင့် မဟာအလက်ဇန္ဒား (ဘီစီ ၃၅၆-ဘီစီ၃၂၃)၊ တို့ မမွေးသေးပါ။ ဗုဒ္ဓ သည် ကျင့်ကြံအားထုတ် ခဲ့သဖြင့် ဘီစီ 588 တွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော မြတ်စွာဘုရား ဖြစ်ချိန်တွင် တရုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဒဿန ဆရာကြီးကွန်ဖြူးရှပ် (ဘီစီ ၅⁠၅၁-၄၇၉) မမွေးသေးပါ။ ကမ္ဘာ့ရူပဗေဒပညာရှင် သင်္ချာပညာရှင် နယူတန်(၁၆၄၃ ဇန္နဝါရီလ ၄ - ၁၇၂၇ မတ်လ ၃၁) ၊ အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း( ၁၈၇၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်-၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက် ) တို့ မမွေးသေးပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှ ထာဝရဘုရားသခင် ၏ သားတော် ခရစ်တော်၊ ယေရှု(Jesus Christ BC 5-AD 30) နှင့် အစ္စလမ်ဘာသာ တမန်တော် မိုဟာမက် (Muhammad AD 570- AD 632) တို့ မပေါ်သေးပါ။ ဗုဒ္ဓတရားတော်များသည် naturally or universally သဘာဝနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ logically ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒအရလည်းကောင်း၊ scientifically သိပ္ပံနည်းကျအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ medically ဆေးပညာဗေဒအရလည်းကောင်း မှန်ကန်လှပေသည်။ မိခင်ဝမ်းတွင်း သားသန္ဓေတည်ပုံကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၆၀ဝ) ကျော်ကတည်းက ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က မိုက်ခရိုစကုပ်မပါ၊ အာထရာဆောင်းမပါ၊ ဓါတ်မှန်မပါ ဉာဏ်တော်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၍ ရှင်းပြတော်မူနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံဗေဒ ကျန်းမာရေးသုတေသနများအရ သိရှိလာကြရသော စိတ်သည် ဦးနှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ နှလုံးသား၏အချိုင့်လေးတွင် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို ဗုဒ္ဓက ဟောပြတော်မူသဖြင့် ဝါရင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာများ သိရှိခဲ့ကြသည်မှာလည်း ကြာပြီဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒ၏ဖြစ်စဉ်ပျက်စဉ်အကြောင်းကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတို့ ယနေ့ခေတ် ဆဲလ်များအစားထိုးဖြစ်တည်မှုအကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ မသိရသေးခင်ကပင် သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ Anatomy အနတ်တိုမီ (ခေါ် ) ခန္ဓာဗေဒကိုလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက တရားတော်များ၌ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အဏုမြူ အက်တမ် (Atom) အကြောင်း မလေ့လာမီကပင် ပရမာအဏုမြူ စသည်ဖြင့် ဟောပြတော်မူခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များသည် သိပ္ပံနည်းကျ၊ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဗေဒ၊ ခန္ဓာဗေဒ၊ ဆေးပညာဗေဒ စသည်တို့ဖြင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်နေလျက်ရှိပြီး၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သမျှ တရားတော်များကို သိပ္ပံပညာက လိုက်မမီနိုင်သေးသော အနေအထားများ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေသေးသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။